Ugqirha oMthubi | Ngeentlanzi
Enye yezona ntlanzi zibalulekileyo nezinqwenelekayo ngabathandi beentlanzi kunye neendawo zasemanzini yile ugqirha otyheli, ekwabizwa ngokuba yi Z. flavescens.
Esi silwanyana sincinci sihle, sihlala kuLwandlekazi lwePasifiki, ngakumbi iziqithi zaseHawaii, URyukyu kunye noMarina, ubonakala ngombala oqaqambileyo kunye nomthubi ofanayo kuwo wonke umzimba.
Ngokuqhelekileyo bahlala kwiindawo ezinomthunzi wee-coral reefs kwaye bafumaneka ngokuqubha kubunzulu be-3 ukuya kwi-4 yeemitha ukuya kuthi ga kwi-40 yeemitha.
Umzimba wayo uphakame ngomlomo ojikelezayo owenza ukuba ubonakale umhle ngakumbi. Abagqirha abatyheli banaso isiseko se-caudal fin kumqolo onokubuyiselwa umva onokuthi okanye ungabhidli kwintando yesilwanyana.
Olu hlobo lweentlanzi lunokufikelela kwiisentimitha ezingama-25 ubude kwindawo yazo yendalo, ngelixa ekuthinjweni zifikelela kwiisentimitha ezili-18 ubude.
Nangona ezi ntlobo zeentlanzi ziqhelana ngokulula nangokuchanekileyo kubomi ekuthinjweni, kubalulekile ukuba sithathele ingqalelo ezinye zeemfuno ezisisiseko ukuze baphile bonwabile kwaye benoxolo kwi-aquarium.
Into yokuqala omele ucinge ngayo bubungakanani be-aquarium oza kuba nayo, kuba ezi ntlanzi zincinci zifuna indawo eninzi yokuqubha kunye nokuzimela ebusuku, ke sicebisa ukuba ube ne-aquarium okungenani engama-200 iilitha zamanzi olwandle, ezinezityalo ezininzi, amatye nezinto ezinokukunceda uzifihle.
Ngendlela efanayo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ezi ntlanzi zinendawo enkulu kwaye zinoburharha, ngenxa yoko zinokwenzakalisa izilwanyana zohlobo olunye. Kuyacetyiswa ukuba uziqhelanise nokuhamba nezinye iintlanzi, ke ndicebisa ukuba ubenazo nezinye iintlanzi ezi-5.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi olwandle » Ugqirha oMthubi
Umbuzo endiwucacisayo ke ngoko yintlanzi yetyuwa? : -
Iindidi kunye neeMilo zee-Aquariums